Rawa Avanafil powder (330784-47-9) hplc =98% | AASw sex sex powder
/ Products / Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni / Avanafil upfu
Rating: SKU: 330784-47-9. Categories: Kushandiswa Kwevarume, Zvepabonde Kuwedzera Mahomoni
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva ku gramu kusvika kuhutano hweAvanafil powder (330784-47-9), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano hwehurongwa.
Avanafil powder inoshanda nekuwedzera kuyerera kweropa kunhengo yemurume panguva yekusimudzira pabonde. Uku kuwedzerwa kweropa kuyerera kunogona kukonzera kumisikidzwa. Iko mukana weavanafil ndeyekuti ine kukurumidza kwazvo kutanga kwechiito uchienzaniswa nemamwe mahormone ekusimudzira pabonde. Inopinza nekukasira, ichisvika pakukwirira kwakanyanya mukati maminetsi makumi matatu kusvika kumakumi mashanu nemashanu.
Raw Avanafil powder basic Characters
Molecular Kurema: 483.95
Makemikari Mazita: Rawa Avanafil powder
Mazita echigadzirwa: Stendra
Avanafil powder yeErectile Dysfunction
Nemhaka yokuti Raw Avanafil powder ndiyo inowedzera kuwedzera kune arsenal ye erectile dysfunction drugs, ngatitarisei zvakare tisati taenzanisa nemamwe madhiradhi ED. Mumakiriniki ekuedzwa, huwandu hwe77% yevarume vane erectile dysfunction avo vakatora Raw Avanafil powder vakawana erection kana vachienzaniswa ne54% yevarume vakatora placebo. Pakati pevarume vane erectile dysfunction dzine chokuita nechirwere cheshuga, 63% yakawana erection pashure pokutora Raw Avanafil powder kuenzaniswa ne42% inotora placebo.
Ngatitarisei pamhedzisiro yeimwe gumi nemaviri-vhiki Phase III kuyedzwa kunyanya. Varume makumi matanhatu nevatanhatu vakapihwa mukana wekutora chero 12, 646, kana 50 mg yeAvanafil powder maminitsi makumi matatu vasati vatanga kuita bonde. Pakange pasina zvirambidzo pakudya kana kunwa doro. Pane mazana matatu ekuedza kuita bonde kwakaitwa panguva yekudzidza, 100% kusvika 200% vakabudirira pakati pevarume vakatora Raw Avanafil powder kana ichienzaniswa ne30% pakati pevarume vakatora placebo. Dzimwe nhau dzakanaka: 300% kusvika 64% yemakumi masere ekuedza pabonde kwakaitwa anopfuura maawa matanhatu mushure mekutora Raw Avanafil poda yakabudirira kana ichienzaniswa chete ne71% kuyedza kwakabudirira mune varume vakatora placebo. Mune vamwe varume, Avanafil powder yakashanda mune mashoma semaminetsi gumi nemashanu. (Goldstein 27)
Ichokwadi, chinhu chimwe chinogona kuparadzanisa Raw Avanafil powder kubva kune mamwe madhidhi eD ED ndokukurumidza kushanda sei. Dr. Wayne Hellstrom, purofesa weurology paTulane University School of Medicine muNew Orleans, yakataura munyaya yeReuters kuti Raw Afilifil powder "inogona kunge yakakurumidza kuita zvayo," sezvo kliniki miedzo yakaratidza kuti inogona kushanda nokukurumidza se15 maminitsi. Zvisinei, pane mimwe mishumo yeCialis powder inoshanda mune maminitsi e15 zvakare.
Ndeipi muyero weAvanafil powder
Avanafil powder inouya sehwendefa kunotora nemuromo. Kuvanhu vanotora 100- mg kana 200-mg doses, Raw Avanafil powder inowanzotorwa kana kuti isina kudya sezvinodiwa, pamusoro pemaminitsi e15 vasati vaita zvepabonde, kwete kamwe kamwe pazuva.
Kune varume vanotora chirongwa che 50-mg, Raw Avanafil powder yakawanda inotorwa pamwe kana kuti isina kudya sezvinodiwa, pamusoro pemaminitsi e30 vasati vaita zvepabonde. Usatora Raw Avanafil powder kakawanda pane kamwechete mumaawa 24.
Iyo yakakura sei Avanafil powder inoshanda
Raw Avanafil powder iri mukirasi yemishonga inonzi phosphodiesterase (PDE) inhibitors. Inoshandiswa kurapa erectile dysfunction (ED: kusava nesimba; kusakwanisa kuwana kana kuchengeta erection mumarume). Ichi chigadzirwa chinosimudzira murume chakawana zita rayo kubva pane chairo chikuru chakashanda zvinoshandiswa izvo zvinobatsira kupararira kweropa mumuviri nenzira yakajairika. Pane zvimwe zvinoshandiswa zvinogadzira Raw Avanafil powder zvakasimba asi hazvina zvakawanda zvakagadzirisa uye zvinogadzirisa izvo zvigadzirwa zvayo chikuru zvinopa.
Inoshanda kuburikidza nekuwedzerwa ropa kunotenderera kusvika ku penis panguva yekuita zvepabonde. Izvi zvakanyanya kuwedzerwa ropa zvinogona kukonzera kuiswa. Raw Avanafil powder haina kurapa erectile kusagadzikana kana kuwedzera chido chepabonde. Raw Avanafil powder haina kudzivirira kubata pamuviri kana kupararira kwezvirwere zvepabonde zvakadai sehutachiona hwehutachiona hweHIV (HIV).
Rawa Avanafil powder ndeyomushonga wemishonga inoshandiswa mukurapa kusava nesimba (kusakwanisa kuwana kana kuchengeta penile erection), inozivikanwa se erectile dysfunction (ED). Iri mukirasi yemishonga inonzi phosphodiesterase inhibitors iyo inosanganisira tadalafil (Cialis powder), sildenafil (Viagra) uye vardenafil (Levitra). Kuiswa kwepenisi kunokonzerwa nokuzadzwa kwepenisi neropa. Kuzadza kunoitika nokuti mishonga yeropa iyo inounza ropa kumuviri inokura muhukuru uye inopa ropa rakawanda kune peni, uye, panguva imwechete, mishonga yeropa inotora ropa kubva peni inoderedza ukuru uye inobvisa ropa shoma kubva peni . Kukurudzira zvepabonde kunotungamirira kumusana kunokonzera kugadzirwa uye kusunungurwa kwe nitric oxide mupenis. Iyo nitric oxide inokonzera enzyme, guanylate cyclase, kubudisa cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Ndiyo cGMP iyo inonyanya kukonzera kuwedzera nekuderedza ukuru hwemitsipa yeropa inotakura ropa kuenda uye kubva kuchirume, zvichienderana, nekuita kukonzera. Apo cGMP inoparadzwa neimwe enzyme, phosphodiesterase-5, mishonga yeropa inodzokera pakukura kwayo, ropa rinosiya peni, uye kugadzirwa kunoguma. Raw Avanafil powder inodzivisa phosphodiesterase-5 kuti irege kuparadza cGMP kuitira kuti cGMP igare nguva yakareba. Kukurudzira kweCGMP kunotungamirira kune engorgement yakawedzerwa yepenisi neropa. Raw Avanafil powder yakagamuchirwa neCDA muna April 2012.
Kunetseka kwakabatana nemigumisiro yakaipa:
• Kusarura kusarura: Kunogona kukonzera kukanganiswa kwechirwere chemavara nekusarura. Shenjerera kune varwere vane retinitis pigmentosa; vanhu vashomanana vane zvirwere zvemajini zve retinal phosphodiesterases (hapana chekuchengetedza ruzivo rwawanikwa).
• Kunzwa kurasikirwa: Kusaerekana kamwe kuderera kana kurasikirwa kwekunzwa kwave kuri kuziviswa kazhinji; Kunzwa kuchinjwa kunogona kuendeswa neinnitus uye nechezinesi. Kuwirirana kwakananga pakati pehutano uye kurasikirwa kwekunzwa hauna kugadziriswa.
• Kusatenderera: Kuderera kwehupenyu kunogona kuitika nekuda kwevasodilator; shandisa nekuchenjerera kune varwere vane kuruboshwe kuruboshwe rwechirwere (aortic stenosis kana hypertrophic obstructive cardiomyopathy); inogona kuva yakanyanya kumira kumaitiro e hypotensive. Kushandiswa pamwe chete ne alpha-adrenergic antagonist therapy kunogona kukonzera zviratidzo zvehutano; varwere vanofanira kunge vane humodynamine hwakasimba vasati vatanga kurapwa pamwero wakaderera. Varwere vanofanira kuchengetedza kana kugadzirisa nguva yakawanda yakakosha ethanol kushandiswa sezvo izvi zvinogona kuwedzera dambudziko rekufungidzirwa kwechiratidzo.
• Kukoshesa: Kurwadziwa kunorwadza> Maawa matanhatu murefu yakataurwa (kashoma). Raira varwere kuti vatsvage nekukurumidza kurapwa kana erection ichiramba> 6 maawa. Shandisa nekuchenjerera kune varwere vane mamiriro ezvinhu anogona kuvasarudzira kune priapism (sickle cell anemia, multiple myeloma, leukemia).
Rawa Avanafil powder Marketing
Inobata Avanafil powder Iva Nezvimwe Zvikamu Zvose
Raw Avanafil powder inogona kukonzera migumisiro. Udza chiremba wako kana chimwe chezviratidzo izvi chakanyanya kana kuti hachiendi:
Dzimwe mimwe migumisiro inogona kuva yakakomba. Kana ukawana chimwe chezviratidzo izvi, tumira chiremba wako pakarepo kana kuwana chirwere chekukurumidzira:
erection inogara kwenguva refu kupfuura maawa 4
kurasikirwa kamwe kamwe kwemaonero mune rimwe kana maziso ose (ona pasi apa kuti uwane mamwe mashoko)
kukanganiswa kwekunzwa kamwe-kamwe (ona pasi apa kuti uwane mamwe mashoko)
Raw Avanafil powder inogona kukonzera mamwe madhara. Dana chiremba wako kana uine matambudziko asina kujairika paunotora mishonga iyi.
Nzira yekutenga Avanafil powder kubva kuAASraw